“သေနတ်သံကြားတိုင်း အသက်စွန့်သွားတဲ့ညီအကိုများအတွက် တစ်သက်တစ်ကမ္ဘာမကြေ” ~ ဒီမိုဝေယံ
“သေနတ်သံကြားတိုင်း အသက်စွန့်သွားတဲ့ညီအကိုများအတွက် တစ်သက်တစ်ကမ္ဘာမကြေ”
ကြားလိုက်ရပြန်ပြီ..၊ ပစ်သတ်လိုက်ကြပြန်ပြီတဲ့ ၊ ပဲခူးမှာ စစ်တပ်ကပစ်သတ်လို့ အပြစ်မဲ့ကျောင်းသားလူငယ်နှစ်ယောက် သေဆုံးရပြန်ပြီတဲ့ ၊ အကြောင်း အရာအပြည့်အစုံမဖတ်ရခင် သတင်းခေါင်းစဉ်မှာတင် တောက်ခေါက် ၊ အသားတဆတ်ဆတ် တုန်နေအောင်ဒေါသထွက်ခံစားလိုက်ရပါတယ် ၊ နိုင်နေတယ် ဆိုပြီးထင်တိုင်းကြဲနေလိုက်တာကွာ ၊ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အောက်မှာ ငါတို့ပြည်သူတွေ ကျောင်းသားတွေရဲ့အသက်ဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေလောက်မှတန်ဘိုး မရှိတော့ဘူးလား ၊ ဥပဒေမဲ့ သတ်ချင်တိုင်း သတ်နေတာကို ငါတို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ဒီလိုပဲငြိမ်ခံနေကြတော့မှာလား ။
ဖြစ်စဉ်က ၄.၉.၂၀၁၀ရက် စနေနေ့ည၁၂နာရီလောက်မှာ၊ ပဲခူးမြို့လယ်ခေါင်ဇိုင်းဂနိုင်းတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ “ကယ်လီဖိုးနီးယား” ကာရာအိုကေဆိုင်ကနေမူးပြီး ထွက်လာတဲ့ ခလရ-၅၉(ပဲခူးဘူတာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့နယ်မြေခံတပ်)က အရာရှိနှစ်ယောက် ငှားစီးတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကျောင်းသားလူငယ် ငါးယောက်စီးလာတဲ့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်(ပဲခူးအခေါ်တုတ်တုတ်)ချိတ်မိ စကားများရန် ဖြစ်ကြရာက စစ်ဗိုလ်နှစ်ယောက်က ပါလာတဲ့စကားပြောစက်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့တပ်အထိုင်ရှိရာ ပဲခူးဘူတာကစစ်သားတွေကို လှမ်းခေါ်လိုက်ပြီး ချက်ခြင်းလို ရောက်လာချိန်မှာပစ်မိန့်ပေးခဲ့လို့ စစ်သားတွေက အချက်ပေါင်းများစွာ ပစ်ခတ်ရာက လက်နက်မဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မောင်စိုးပိုင်ဇော်(၁၈) နှစ်နဲ့ မောင်အောင်သူဟိန်း (၂၂)နှစ် တို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါ တယ် ။
ပဲခူးမြို့ဇိုင်းဂနိုင်း(တောင်)ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ အိမ်အမှတ်၂၀၀နေ အဘဦးမြတ်သူရဲ့သား မောင်အောင်သူဟိန်းက၆ချက်ထိမှန်ပြီး ဇိုင်းဂနိုင်း(တောင်) ရပ်ကွက်၊ မြလမ်း၊ အိမ်အမှတ်၁၇၇နေ အဘဦးဟုတ်ကြည်ရဲ့သား မောင်စိုးပိုင်ဇော်က ၄ချက်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်၊ မြလမ်းထိပ်မှာပဲပစ်ခတ်မှုဖြစ်တာဖြစ်ပြီး သွေးသံတရဲရဲ လမ်းမပေါ်လဲကျသွားကြချိန်မှာ စစ်သားတယောက်က“ စစ်တပ် ကိုစမ်းချင်တဲ့ကောင်စမ်း သေချင်းဆိုးနဲ့သေသွားမယ်” လို့ ကြိမ်းမောင်းအော်ဟစ်ပါတယ် ၊ ရဲတွေရောက်လာချိန်မှာ စစ်တပ် ကရှောင်ထွက်သွားပြီး ဘယ်သူမှ ထွက်ကြည့်လို့မရအောင် ရဲတွေက ပိတ်ဆို့ပေးထားပါတယ် ၊ အလောင်းကိုဆေးရုံသယ်တာတောင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆေးရုံကားနဲ့မသယ်ပဲ ဆိုက္ကားနဲ့ ဖြစ်သလိုသယ်ခဲ့ပါတယ် ။
၅.၉.၂၀၁၀နေ့မှာ ချက်ချင်းအသုဘစီစဉ်ဘို့ အာဏာပိုင်တွေက ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ် ၊ မိဘတွေ အဝေးရောက်နေလို့ ပြန်လာချိန်ရအောင် စောင့်ခွင့်ပေးပါ ၊ အိမ်ပြန် သယ်ခွင့်ပေးပါလို့ သက်ဆိုင်ရာ မိသားစုဝင်တွေက အာဏာပိုင် အဆင့်ဆင့်ဆီ ခွင့်တောင်းခဲ့ပေမဲ့ (မတရားသတ်ဖြတ်မှုကို ဖုံးကွယ်ချင်တဲ့ အာဏာပိုင်တွေ ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း) အလောင်းကိုတော့ အိမ်ပြန်သယ်ခွင့်မပြုခဲ့ပါ ဘူး၊ ပဲခူးတမြို့လုံး အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ပြီး ထောင်ဂဏန်းရှိမဲ့လူထုက ပဲခူးဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံ ကို သတင်းစုံစမ်းသွားရောက်လေ့လာကြပေမဲ့ ရဲလုံခြုံရေးအများအပြားနဲ့ အရပ်ဝတ်ထောက်လှမ်းရေးတွေက တားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။
သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ပြီးချိန်မှာ သေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူ ကြေကွဲစိတ်မကောင်းဖြစ်စိတ်၊ နာကျည်းခံပြင်းစိတ်တွေကြောင့် ဒင်းတို့ကိုနိုင် အောင်ပြန်မတိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေကိုပဲ တနုံ့နုံ့တွေးအားမလိုအားမရဖြစ်နေမိပါတယ်၊ စစ်အာ ဏာရှင်တွေရဲ့ ဒီ့ထက်ဆိုးတဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကို အခါခါမြင်ဘူး ကိုယ်တိုင်လဲခံစားဘူးပါရဲ့ ၊ ဟောဒီနှလုံးသားက ထုံကျင်အသားကျမနေဘူး ၊ ကြားလိုက်ရတိုင်းနာတယ် ၊ မြင်လိုက်ရတိုင်းနာတယ် ၊ တွေးမိ တိုင်းလဲနာတယ်ဗျာ ။
ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုတဲ့ သတင်း စာတွေ တီဗွီဖန်သားပြင်တွေ ပေါ်က ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် ပြောပြောနေတဲ့စကားတွေ ဘယ်မှာလဲ ၊ ဒါလား တရားဥပဒေစိုးမိုးတာ ၊ ဒါလား ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာ ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေကြောင့် မလူးသာမလွန့်သာတဲ့ ပြည်သူတွေကို ပိပြားနေအောင်နင်းဖိထားပြီး အများပြည်သူမမြင်ကွယ်ရာ ကျေးလက်တောရွာတွေမှာ ထင်သလိုလုယက် ၊ မုဒိန်းကျင့်လူသတ် လုပ်နေတဲ့ဇရိုက်တွေ ခုလို မြို့ပြပေါ်ထိပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအတင့်ရဲကျူးလွန်လာတာ တုန့်ပြန်မှုမရှိ ငြိမ်ခံနေကြ ရင်တော့ ရုပ်ရှင်တွေ ဗွီံဒီယိုတွေထဲတွေ့ဘူးတဲ့ ဖက်စစ်ခေတ် ဂျပန်တွေထက်ဆိုးလာတော့မယ် ။
“စစ်တပ်ဆိုတာ လက်နက်အားကိုးတန်ခိုးပြဘို့မဟုတ်ဘူး ၊ စစ်တပ်က ပြည်သူတွေကို လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်ဘို့မဟုတ်ဘူး ၊ စစ်တပ်ဟာ ပြည်သူရဲ့ အစေခံပဲဖြစ်ရမယ် ၊ ပြည်သူဟာ စစ်တပ်ရဲ့အစေခံ ဘယ်တော့မှမဖြစ်ရဘူး ” လို့ပြောခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာသက်ရှိထင်ရှားရှိလို့ စစ်တပ်ရဲ့ ဒီလိုရက်စက်ယုတ်မာမှုတွေကိုသာသိရင် ဆရာတင်ခေါ်လာခဲ့တဲ့ ဂျပန်ကိုပြန်ချသလို သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကို “ရရာလက်နက်နဲ့ပြန်ချကြတော့”လို့ ပြည်သူကိုနှိုးစော်ပြီး သူကိုယ်တိုင် တော်လှန်စစ်ကိုဦးဆောင်ဆင်နွှဲမယ်ထင်ပါရဲ့ ။
“ညီအကိုတို့ ပေတရာပေါ်မှာစီးတဲ့ သွေးတွေမခြောက်သေးဘူး ၊ မတွေဝေနဲ့ ” တဲ့ ၊ ဒီလောက်ထပ်ထပ်သတ်ပြီး သွေးဟောင်း တို့စွန်းခဲ့တဲ့မြေပေါ် သွေးသစ် တွေအကြိမ်ကြိမ်စီးနေတာ အပြစ်မဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ခုလိုရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံရ မှုမျိုးကို မကြုံဘူးမခံစားဘူးလို့ကိုယ်ချင်းမစာနိုင်သေးတဲ့ ညီငယ်တွေလဲ သတိမူစဉ်းစားကြဘို့လိုပါပြီ ။
၁၉၈၈ ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတော့ လက်သဲဆိတ်ခံရချိန်မှာ လက်ထိပ်သာမက ရင်ထဲအသဲထဲသွေးသားထဲကပါနာခဲ့ကြလို့ ကျွန်တော်တို့ အောင်မြင်မှု တစ်စုံတစ်ရာရရှိသည်အထိ တိုက်ပွဲဝင်ရဲခဲ့ကြတယ် ၊ ကိုဖုန်းမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့ ရန်ကုန်စက်မှုတက္က သိုလ်ဝန်းထဲမှာ ခုလိုရက်ရက်စက်စက်ပစ်သတ်ခံခဲ့ ရမှုကနေ ကျောင်းသားသပိတ် ၊ နောက်ဆုံးလူထုအုံကြွမှုကြီးဆက်ဖြစ်ပြီး စိန်လွင်လိုစစ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရတွေနဲ့ နေ၀င်းရဲ့တပါတီအာဏာရှင်စနစ် ကိုဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တယ် ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်မကျေခဲ့ပါဘူး ၊ ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့မှီခဲ့တဲ့ ကိုဖုန်းမော်ကိုစိုးနိုင်ကစလို့ ၁၉၈၈မတ်လမှာအသတ်ခံ ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေ ၊ ၁၉၈၈ ဇွန်လမှာအသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေ ၊ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးမှာ အသတ်ခံခဲ့ရ တဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ၊ ပြည်သူတွေ ၊ ဒီပဲရင်းမှာမတရားရိုက်သတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ မှာပစ်သတ်ခံရတဲ့ သံဃာတော်တွေ ၊ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ၊ တောထဲတောင်ထဲမှာကျဆုံးသေဆုံးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား တွေ ၊ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာသေဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ တာဝန်မကျေသေးပါဘူး ၊ သူတို့သေဆုံးခဲ့ရမှုတွေ အတွက် တရားမျှတမှုကို မဖြစ်စေသေးသမျှ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ကြေပြီ မခေါ်နိုင်ပါဘူး ၊ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေရဦးမှာပါ ။
စစ်အာဏာရှင်သက်တာရှည်ခဲ့ပြီ ၊ အနိဌာရုံတွေများပြီ ၊ လူပုံအလယ် ရက်ရက်စက်စက်ပစ်သတ်တာမျိုးကြောင့် မဟုတ်ပဲလဲ စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့် နေ့စဉ်လူတွေသေနေကြပါတယ် ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် အဟာရချို့တဲ့ ၊ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါ ဘယထူပြော ၊ ဆေးကုသစရိတ်မတတ်နိုင်တော့ ရောဂါကနိုင်သွားပြီးတဖြည်းဖြည်းသေ ၊ အဲလိုပြည်သူတွေလဲ အသတ်ခံ လိုက်ရတာပါပဲ၊ ကလေးမီးမဖွားနိုင်လို့သေတယ် ၊ မြွေဆိပ်မိလို့သေတယ် ၊ ဆေးရုံကိုအချိန်မှီမရောက်လို့သေတယ် ၊ ဆေးရုံ မှာဆေးမရှိလို့သေတယ် ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းကိုမရှိလို့သေတယ် ၊ ဆရာဝန်မရှိလို့သေတယ် ၊ ၀ဋ်ကြွေးမဟုတ်ဘူး ၊ ကံကြမ္မာ မဟုတ်ဘူး ၊ ပြည်သူတွေဘာဖြစ်နေနေ ငတေမာပြီးရောကိုယ်ကျိုးရှာနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေသတ်တာ ။
နာတယ်..၊ လက်ထိပ်ကတင်မဟုတ်ဘူး ၊ ရင်ထဲအသဲထဲ သွေးသားထဲကပါနာတယ် ၊ ခုလိုရက်ရက်စက်စက် ပစ်သတ်ခံရ တာမျိုး ပိုနာတယ် ၊ မကြေ..ဘယ်တော့မှမကြေ.. တစ်သက်တစ်ကမ္ဘာမကြေ..။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ( ၂၂ ) နှစ်ပြည့်မွေး...
ရွှေဝါရောင်ဆရာတော် ဦးနေမိန္ဒ နှင့် ဆရာတော် ဦးဣဿရိယ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ...
မီးလျှံကြားမှာ ပြည်သူ့ရင်ခွင် ခိုလှုံသူ ဗိုလ်ကြီးစိ...
နအဖ ဥာဏ်ဝင်းတို့စီးနင်းလိုက်ပါလာခဲ့သော ကားပေါ်တွင...
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ရွှေဝါရောင် တော်လှ...
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားမှာ ရွ...
ဦးမိုးဟိန်း(ခ)သားဂျာနယ်ကျော် ၏ ရုပ်ကလာပ်ကို ရေဝေး...
အခုတော့ ရာဇ၀င်ရိုင်းကြီး တစ်ခုဖြစ်ရချေပြီ...
သခင်အောင်ဆန်း က "လူညံ့စိတ်ဖျောက်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးကိ...
၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့မှ မမာမာဦး၏ ဖခင်ကွယ်လွန်သွားတာနဲ့...
“အထူအပါး”၏ အရှင်သခင်အားမွေးဖွားပေးခဲ့သောဖခင်ကြီး၏ ...
ဂျပန်အစိုးရရဲ့ အကူအညီ ကျောင်းဆောက်ခွင့်တွေကို ပိတ်...
ဆရာအောင်သင်းရဲ့ လူငယ်နဲ့အမွေ.. နှင့် လူငယ်နဲ့အချစ်...
၂၀၀၇စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီး သုံးနှစ်ပြ...
၃ နှစ်ပြည့်ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ဖိတ်...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်...
၂၀၀၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ သံဃာတော်များ ဆုတောင်း မေတ္တာပိ...
အလုံမြို့နယ် အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်ခေါင်းဆောင် ကိုလူမော်...
ပြည်သူတွေကို လိမ်လည် လှည့်ဖျားစည်းရုံးနေတဲ့ ၂၀၁၀ေ...
လွတ်လပ်တဲ့ ဗမာပြည် ဆီသုိ့ လွတ်လပ်ခြင်း ငှက်ငယ်တစ်ေ...
ဆရာအောင်သင်း ပျော်ဘွယ်မှာ ဟောပြောခဲ့တဲ ယနေ့လူငယ်ဘဝ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆန့် ကျင်ရေး ကျောင်းသားလူငယ်များ၏...
၈၈အာဇာနည် မ၀င်းမော်ဦး ကွယ်လွန်ခြင်း(၂၂)နှစ်ပြည့် ...
အဘ သခင်အုန်းမြင့် ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး ဈာပနအခမ်းအနာ...
ပရဟိတ သူရဲကောင်းတစ်ဦး မွေးဖွားပေးခဲ့သော စာရေးဆရာမ...
သွေးသစ္စာရှင်(သို့)ရဲရဲတောက် မ၀င်းမော်ဦး၏ ကွယ်လွန်...
၁၉ရက် စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈က စစ်အာဏာရှင်တွေ လက်ချက်နဲ့ ကျဆ...
ဆုံးရှုံးမှုတွေ ထွေးပိုက်ရင်း တမ်းတမိတယ် အမိမြေရယ်...
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ...
အဘသခင်အုန်းမြင့်ရဲ့ နာရေးဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်း
သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး အင်းစိန်ထောင်အတွင်း တရားပွဲ.. (ရ...
ထင်ရှားကျော်ကြားသော ကြယ်တစ်ပွင့် လွင့်ကြွေခဲ့ပြီ (...
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ချီတက် ဆန္ဒပြပွဲ-ဂျပန...
ဆရာအောင်သင်းရဲ့ မကွေးမှာ ဟောပြောခဲ့တဲ့ ယနေ့လူငယ်နှ...
ပလပ်စတစ် လောင်းတဲ့ အကြော်စုံ...
NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတချို့ ပျက်ပြယ်ကြောင်းေ...
ဘီဘီစီ ဟဲလို သတင်းလွှာ.....
ရန်သူနဲ့ တွေ့တော့ ပန်းလို၊ ပြည်သူနဲ့ တွေ့ တော့ မီး...
ဘဘဦးဝင်းတင် အဆုတ်ပွရောဂါကြောင့် အာရှတော်ဝင်ဆေးခန်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွ...
မကွေးတိုင်း တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်မှ အသက်(၁၃)နှစ်အ...
စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များအဖွဲ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဝါ...
ဗိုလ်မှုးအောင်းလင်းထွဋ်ပြောတဲ့ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းဖြစ်စဥ...
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်း...
ပဲခူးမြို့မှာ သေဆုံးသွားတဲ့ လူငယ်နှစ်ဦးအတွက် ရက်...
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ (၇၁) နှစ်မြောက် ဆရာတေ...
ဒီတောင်ကို မောင်ကျော်နိုင်ပါ့မလား. ..
အလုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ တပ်ပြေးပါဆိုပြီး စခန်းမှုးရဲ...
မော်လ်ဒိုဗာ နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သော ဆန္ဒခံယူပွဲ မဲပေ...
ဓာတ်ပုံများက ပြောတဲ့ ဆင်ဖြူများရှင်ရဲ့ တရုတ်နိုင်င...
မဝင်းမော်ဦး(၂၂)နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေး တရားတော်နာ ဖိ...
မဲပုံးလို့ သူတို့ပြောတဲ့အမှိုက်ပုံးတွေကို တိုင်းနှင...
ဘဘ ဦးတင်ဦး၏ အကိုကြီး ကွယ်လွန်ရှာပြီ...
ပဲခူး လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် လူထုတရပ်လုံးအတွက် စတေ...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ တရုတ်သံရုံးရှေ့တွင် အနီးကပ် ဆန္ဒပြခ...
ဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့ ပစ်သတ်ခံရသူ နှစ်ဦးရဲ့ ဈာပန (Bu...
ပဲခူး ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု အပေါ် မလေးရှားနိုင်ငံ နှင...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီများနှင့် ကို...
ပြည်တွင်းမှာ ခွေးကြောက်ရ. မဲဆောက်မှာ ရဲကြောက်ရနဲ့ ...
ပဲခူးမြို့မှာ သေဆုံးသွားတဲ့ လူငယ်နှစ်ဦးထားရှိရာ ...
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် ဦးဆောင်ဆရာတော် တစ်ပါးဖြစ်သည့် အရှ...
ပဲခူးမှာ စစ်တပ်ရဲ့လူငယ်နှစ်ဦးအပေါ် ရက်စက် အကြမ်းဖက...
၃ နှစ်ပြည့် ပိတ်ဆို့မှု၏ ထွက်ပေါက်...
“စစ်အာဏာရှင်ပျက်ပြိုကာအတည် ပြည်သူ့ခေတ်မှာတို့တတွေ ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဦ...
အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဂျီနီဗာ ကြေငြာစာတမ်း....
ရန်ကုန်က ဂျပန်နဲ့ ကားဖက်စပ် ထုတ်တဲ့ စက်ရုံတစ်ခုမှ ...
အ၀ါရောင်ကိုက်ခဲမှု (ရွှေဝါရောင် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှ...
ပဲခူးမြို့မှာ ရေကြီးနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါ...
အနုပညာသမားများ … ပွေ့ဖက်ထား... နှင့် ပင်အိုရွက်နုသ...
တာချီလိတ်မြို့ရှိ အာဏာပိုင်များ၏ မတရား လာဘ်စားမှုမျ...
အဆိုတော်တစ်ဦးမှ ပရိသတ်အား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်း......
မောင်တစ်ထမ်း + မယ်တစ်ရွက် = ၂၉